Naga soo wac: 0086-18731103336
Ku dhowaad 100 Soo-saarista Wadajirka ah ee Kiimikada Weyn, Waxyaabaha ceyriinka ah ee mar kale soo kordhaya?
Tan iyo bilowgii sanadka, taayirka, kiimikada, birta, bacriminta kiimikada iyo wixii la mid ah ee kor u kaca qiimaha wadajirka ah, shirkadu si weyn ayey saameyn ugu yeelatay, faa'iidada badeecada ayaa si aad ah loo cadaadiyey …… Qiimaha alaabta ceyriinka ah ayaa isbadashay. Ku dhowaad 100 shirkadood oo kiimiko ah ayaa joojiyay wax soo saarkii, ...
Dhowr arrimood ayaa ka caawiya ISO New England Weather Adag Jiilaalka
Dhowr arrimood ayaa ka caawiya ISO New England Cimilada adag ee Jiilaalka Gobollada iyo arrimo caalami ah, oo lagu daray diyaargarowga iyo dib u dhaca cimilada qabow, waxay ka caawisay ISO New England inay ka badbaado xilliga qaboobaha ee 2014-15 iyada oo ay jiraan arrimo hawleed ka yar iyo qiimo aad u hooseeya, ISO ayaa tidhi Jimcihii. Warbixin ku socota New England Power ...
100 Shaxda Qiimaha Badeecadaha - 10/04/2015
100 Shaxda Qiimaha Badeecadaha - 10/04/2015 Waxaa qiimeeyay SunSirs in la raacay 100 badeecooyin, 32 badeecooyin ayaa ku kordhay qiimaha, 24 ayaa hoos u dhacday 44na isma bedelin 10/04/2015. 2.74%), Hydrochloric acid (2.24%), PTA (2.00%), halka lar ...
Kudar: aagga warshadaha tangqiaotang zhang jiagang city china
xiriiriyeyaasha la xiriira